अब आधा सिलिन्डर भरेको ग्यास मात्र पाइने — Imandarmedia.com
अब आधा सिलिन्डर भरेको ग्यास मात्र पाइने
काठमान्डाै । अब सिलिण्डर आधा मात्र भरेको ग्यास पाइने भएको छ। नेपाल आयल निगमले सिलिन्डर आधा मात्र भनेर बजारमा पठाउन ग्यास उद्योगहरुलाई निर्देशन दिएको हो। हाल एक सिलिन्डरमा १४ दशमलव २ केजी ग्यास हुन्छ। तर अब सिलिन्डरमा ७.१ केजी मात्रै ग्यास हुनेछ।
निगमका एक अधिकारीकाअनुसार मागअनुसार ग्यास र्पुयाउन नसकिने अवस्था आएपछि आधा सिलिण्डर ग्यास बेच्ने निर्णय भएको हो। आयल निगमले बुधबार राति नै सिलिन्डरमा आधा परिमाण मात्रै ग्यास भर्न निर्देशन दिएको एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेले पुष्टि गरे।
२०७२मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाकन्दीमा पनि आधा मात्रै सिलिन्डर भरेर वितरण गरिएको थियो। अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण ग्यासको माग उच्च छ। तर बजारमा आपूर्ति निकै कमजोर छ, कालोबजारी मौलएको छ। सुरुमा ग्यास आपूर्ति भएको तर उपभोत्ताले धेरै सञ्चय गरेको तर्क गर्दै आएको सरकारले लकडाउन सुरु भइसकेपछि भने आधा सिलिण्डर गर्ने नीति लिएको छ।
सबैलाई ग्यास उपलब्ध गराउन आधा सिलिण्डर मात्र भरेर बेच्न लागिएको सरकारको तर्क छ। एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, हामीले आधा भर्न सुरु गरिसकेको छैनौं। सरकारबाट थप निर्देशन कुरिरहका छौं।’
चित्लाङको शिवालय मन्दिरबाट पाँच मूर्ति चोरी
सुशान्तको निधनको ७ महिनापछि उनको हातले लेखेको यस्तो पत्र सार्वजनिक, भारतभर हंगामा
भारतले नेपालमाथि लगायो फेरि यस्तो प्रतिबन्ध
नेपालमा फेरि शक्तिशाली भूकम्पको धक्का, कहाँ हो केन्द्रविन्दु ?
ईश्वर पोखरेलका सम्धीले दिए राजीनामा, के हाे कारण ?
काँग्रेसमा पुनः ज्योतिषीको चर्चा, देउवाले भने- ‘अब म प्रधानमन्त्री’
संसद विघटनप्रति भारतले बल्ल दियो यस्तो प्रतिक्रिया, अब के गर्ला ओली सरकार ?
संसद विघटन भएको ५ दिनपछि भारतले दियो यस्तो प्रतिक्रिया, अब के गर्ला ?
संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा- ओलीले कसरी प्रयोग गरे संविधानमै नभएको अधिकार ?